Hunhu uye nemhando dzedzimba dzimba | Green Renewables
ChiGerman Portillo | | Updated on 10/08/2021 15:48 | Imba yeGreen, Environment
Kugona kwesimba uye simba rinowedzerwazve zvinowedzera kukurudzira dzimba kuti dzive dzakasvibira uye nekuchengetedza zvakanyanya nharaunda. Dzimba dzecological idzo ane simba rekushandisa ishoma uye haigadzike zvinokanganisa nharaunda, zvese mweya nemarara.
Asi kuti tivake imba yezvakatipoteredza tinofanira kutanga taziva kuti ndezvipi zvinhu zvinoenderana nayo uye ndeapi asingagone kukanganisa nharaunda, zvese mukuvaka kwavo uye mukushandisa kwavo. Uye zvakare, kune akati wandei marudzi edzimba dzezvakatipoteredza zvinoenderana nenzvimbo dzavakavakwa, izvo zvinoshandiswa, mashandiro aunoda kuvapa, nezvimwe. Iwe unoda kuziva zvakawanda nezve dzimba dzezvakatipoteredza?
1 Hunhu hwezvakatipoteredza dzimba
1.1 Dhizaini dhizaini
1.2 Kuremekedza nharaunda
2 Mhando dzedzimba dzekugara
2.1 Edzimba dzimba dzemapuranga
2.2 Eco-inoshamwaridzika dzimba dzezvidhina
2.3 Edzimba dzekongiri dzimba
3 Ndezvipi zvakanakira imba yezvakatipoteredza?
Hunhu hwezvakatipoteredza dzimba
Chinhu chekutanga usati waziva mhando uye misiyano iripo mudzimba dzezvakatipoteredza, isu tozoziva hunhu hwavo uye mashandiro avo. Imba yeecological imba yekugara iyo inotora mukana nezviwanikwa zviwanikwa zvezuva nenyika uye izvo zvakare zvinoremekedza nharaunda zvese panguva yekuvakwa kwayo uye kana yapera.
Kuti ugone kuwedzera zviwanikwa kusvika pakukwirira zvese mukuvakwa kwayo uye muchikamu chayo chekushandisa, dhizaini yedzimba dzezvakatipoteredza inofanirwa kuve yehunyanzvi uye kuzadzisa zvimwe zvinodiwa, senge:
Imba ine bioclimatic dhizaini inokwanisa kugadzirisa zviwanikwa zvinopihwa nharaunda kusvika pakukwirira, senge maawa echiedza chezuva uye kupisa kunoburitswa pasi kupisa imba uye, kune rimwe divi, mhepo inoyerera kufefetedza uye kutonhodza imba.
Kuti uparadzanise madziro kubva kamwe kamwe shanduko yetembiricha kunze, izvi bioclimatic dhizaini zvinoratidzirwa nekuve neakakura kwazvo ekuputira ukobvu kupfuura zvakajairika. Nenzira iyi, kana kupisa kana kutonhora kwekunze hakukwanise kupinda mukati meimba uye tembiricha yemukati inogona kuchengetwa yakagadzikana, pasina chikonzero chemhepo inodziya kana michina yekupisa.
Ichokwadi chekuchengetedza pamwe nekuputira chinopa kare mabhenefiti esimba, nekuti isu tiri kudzivisa gasi rinodziya mumhepo muchadenga nekushandisa zvakanyanya simba remagetsi kupisa kana kutonhodza imba. Nekuzviparadzanisa uku tichange tiri kubatsira kurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze.
Bioclimatic dhizaini zvakare ine maitiro akakodzera kutora mwenje wezuva yakawanda sezvinobvira. Kunyanya iyo yekumaodzanyemba yakatarisana, kazhinji ndiyo inoona yakanyanya mwaranzi yezuva. Uye zvakare, kupisa uku kunogona kuchengetwa nezvinhu zvine thermal inertia, inokwanisa kuchengetedza kupisa masikati uye nekuisunungura panguva yehusiku kana kuchitonhora.
Kugadzira mhepo dzemhepo dzinofema uye nemhepo mumba inogona kuiswa chivanze chemukati zvekuti kufefetedza kwepakati kunoyambuka mumakamuri ese eimba.
Humwe hunhu hunozadziswa nedzimba dzezvipenyu ndezvekuti izvo zvinhu zvinoremekedza nharaunda. Ndokunge, izvo zvigadzirwa zvavanovakwa nazvo zvakasikwa, zvinogadziriswazve kana kushandiswazve uye zvine tsoka diki yezvakatipoteredza. Uye zvakare, isu tinoedza kushandisa zvinhu zvinoda simba shoma, zvese mukugadzira kwavo uye nekutakura kwavo.
Chakawedzerwa icho chatinowedzera kuzvinhu izvi ndechekuti ivo havangoremekedze nharaunda chete, asi zvakare nehutano nekugara kwevanhu. Izvi zvinodaro nekuti izvo zvinhu zvakavakirwa dzimba dzezvakatipoteredza haina makemikari kana chepfu izvo zvinogona kukanganisa hutano hwedu uye hazvichinje magineti minda mukati meimba, zvichibatsira kuwana nharaunda yakanaka mukati.
Zvinhu zveHygroscopic, semuenzaniso, zvinodzora hunyoro zvakasikwa, saka mamukisi edu uye kufema kwedu hakuzokanganiswe nehunyoro hwakanyanya kana hwakanyanya.
Mhando dzedzimba dzekugara
Zvichienderana nezvinhu zvakavakirwa dzimba dzezvipenyu pane mhando dzakasiyana. Chinhu chakakosha kuchengeta mupfungwa ndechekuti imba inoda mhando dzakasiyana dzezvinhu uye zvinonetsa kwazvo kuti vese pamwe chete vasangane nehunhu hwakatsanangurwa pamusoro.
Somuenzaniso, dzimba dzematanda nezvidhinha Ivo vanogona kusangana neakatumidzwa hunhu zvinoenderana nekuti kuvaka kwavo kunoremekedza nharaunda uye nevanhu vanogara mairi. Nekudaro, dzimba dzekongiri usasvike pamatanho echisikigo uye ane hutano zvinhu, sezvo iyo kongiri pachayo iine zvinhu zvine chepfu mukuumbwa kwayo izvo zvisina kana ecological kana hutano. Asi iwe unogona kuita ongororo dzedzimba idzi kuti uone kuti imba yacho ingave yakaita sei.
Edzimba dzimba dzemapuranga
Wood ndeye ecological zvinhu par kugona, zvakasiyana-siyana uye izvo zvinounza kwakawanda kudziya kumba kwedu. Chinhu chakanakira huni ndechekuti ine hunyanzvi uye inobatsira kuchengetedza hunyoro mumba mune hwakakwana mamiriro. Tinofanira kufunga kuti kana huni inobatwa nevarnish, iyo pores ichave yakavharwa uye haizogone kuburitsa yayo hygroscopic basa.
Imwe mukana unopihwa nehuni kuimba yezvakatipoteredza kugona kwayo kudzivirira nzvimbo. Kuti imba isapinde, zvese kubva mukutonhora uye kupisa, huni dzinogona kutidzivirira kubva kunze kwekushisa. Pachayo pachayo inodzivirira zvakanaka, asi kana ikasanganiswa nezvimwe zvinhu zvinobatsira kuputira zvakanyanya, kushanda kwayo kunowedzera.
Kunodziya ihwo hunhu hwemukati hwehuni. Ndokunge, kunyangwe kudziya kunounzwa nehuni kumba kusingagoni kuyerwa nenhamba, ichokwadi kuti uriri hwakavezwa nematanda hunyoro uye hunoita tsoka dzedu, iko kumadziro kwemadziro, uye kunopa kunzwa kwekusununguka. mukudzoka icho chinhu chipenyu.
Iko kutya kwakawanda kwedzimba dzemapuranga ndiye ane motoNekudaro, mirau yedzimba dzemapuranga yakanyanya kuomarara kana zvasvika pakuisa magetsi munzvimbo dzakapfava dzinogona kubata moto. Moto wemumba nhasi uno unowanzo kuve nekuda kwezvikonzero zvisina hanya senge zvitofu zvisina kuzvidzivirira izvo zvinowanzotungidza masofa, kapeti kana machira kutanga. Asi moto uyu unogona kuitika mudzimba dzerudzi rupi zvarwo.
Chero zvazvingaitika, kana moto ukaitika unobata matanda edzimba, chinotanga kutsva ndechekuti rukoko rwekunze rwehuni uye urwu rwakafemerwa.
Iyi imwechete dura, yatopiswa, inoshanda sedziviriro yekutanga inodzivirira iyo yakasara yehuni kuti isatsva nekukurumidza.
Eco-inoshamwaridzika dzimba dzezvidhina
Idzi dzimba dzezvidhina ndedzechipiri dzakanyanya kuvakwa, nekuti ndiyo nzira inoshandiswa zvakanyanya munhoroondo, mushure mehuni.
Tisati tatanga kuvatsanangudza, tinofanirwa kufunga nezvazvo kune zviuru zvemhando yezvidhina, saka yega yega ichave nehunhu hwakasiyana. Nekudaro, kuti tiwedzere, isu tinotaura kuti chidhinha chakanakisa pakuvaka dzimba dzezvakatipoteredza ndeavo akagadzirwa nevhu risina kubikwa, nekuti huwandu hwesimba hunodiwa pakupfura, izvo zvinoreva kukanganisa kukuru nharaunda.
Zvidhinha ivo havape izvo zvakafanana zvakanakira kana mabhenefiti sehuni, sezvo mune mazhinji acho zvichidikanwa kushandisa inodziya inodziya. Uye zvakare, makona eimba anowanzo kutambura discontinuities mukati mekuputira uye nekudaro haatarise tembiricha yekunze zvakanyanya.
Panyaya yemoto, zvidhinha zvinopindura zvirinani, nekuti hazvipise kana kuparadzira moto. Kuvakwa kwezvidhinha kazhinji kunoda, kazhinji, kuwanda kukuru kweiyo facade uye yemukati madziro kupfuura nehuremu huni masisitimu. Nekuda kweizvi, nzvimbo inobatsira yeimba yedu inenge iri diki pane dzimwe nguva.
Nezve junction points pakati pezvidhinha, shandisa zvinhu izvo dzakachengeteka kune hutano hwedu uye izvo zvine hushoma mhedzisiro pane zvakatipoteredza.
Mamwe marudzi ezvivakwa zvezvidhinha ndeaya:
Calcareous zvidhinha masvingo
Masvingo ematombo echisikigo
Edzimba dzekongiri dzimba
Iyi ndiyo mhando yekupedzisira yeiyo green house yatinozoona. Kongiri idombo rekugadzira rakagadzirwa nesamende, zviyero, mvura uye, kazhinji, zvinowedzerazve kugadzirisa mamwe maitiro ayo. Izvi zvinoita kuvaka hazvisi zvisikwa zvachose, sezvo isinga zadzikise zvinodiwa neyakagadziriswa kuvaka pasina kukanganisa kune zvakatipoteredza
Kuenzaniswa nezvidhinha nehuni, kongiri haina hunyanzvi hwekupisa uye haina hygroscopic, saka havagadziri tembiricha uye humhutu hwemukati zvakanaka. Uye zvakare, ine yakati rebei tsoka, nekuti inoda huwandu hwesimba kugadzirwa kwayo.
Simbi ndeimwe yemidziyo yatinofanirwa kudzivirira mune chero eiri mhando dzedzimba dzeecological, nekuti haisi ecological zvachose uye haifarire nharaunda ine hutano mukati meimba nekushandura iyo yemagineti yemagetsi enharaunda.
Nekuti kongiri chinhu chinoshandiswa zvakanyanya pasi rese, inoita kuti ive chinhu chakachipa uye chinodhura yemabhajeti ese.
Ndezvipi zvakanakira imba yezvakatipoteredza?
Mufananidzo - Wikimedia / Lamiot
Izvo zvakanakira imba yezvakatipoteredza zvinovakirwa mukuvandudzwa kwekugona uye kudzikisira kwekukanganisa kwenzvimbo uye tsoka yezvisikwa. Imba yega yega yakagadzirirwa neimwe nzira saka inozove nezvinhu zvakasiyana kubva kune imwe. Nekudaro, izvo zvakakosha izvo zvavanofanira kusangana kuti vaone kuti vese vane zvakafanana mabasa ndeaya anotevera:
Bioclimatic akitekicha: inoenderana nekushandiswa kwekusimba kwekuvakisa zvinhu uye zvishandiswazve zvigadzirwa. Neiyi nzira, kudzikiswa mukushandiswa kwezvinhu zvakasvibirira uye kukanganisa kwezvakatipoteredza kunogadzirwa nekuvaka uye kushandiswa kwezvakataurwa izvo zvichawanikwa.
Zvokutaurirana: Imba yacho inofanirwa kuve yakanangana nekugadzirisa kwesimba zviwanikwa.
Kudzivirirwa kwezuva: Kufanana nekutarisisa kuyedza kushandisa zviwanikwa zvesimba, iwe zvakare unofanirwa kutsvaga dziviriro kubva kumwaranzi yezuva.
Tora mukana weiyo greenhouse mhedzisiro: Inofanirwa kutariswa kuti kudzikisa kushandiswa kwesimba remagetsi, kudziya kwemba kunofanirwa kushandiswa pakupisa. Nenzira iyi, yakasvibirira greenhouse mhedzisiro yakashandiswa kuwana yakakwana tembiricha.
Simbiso uye kuputira: Kuiswa chisimbiso uye kuputira kwakakosha kugadzirisa kupisa kwemukati. Nekuda kwekuvhara kwakakodzera uye kuvhara, tinogona kudzikisa mashandisiro emagetsi emagetsi epamba. Semuenzaniso, muzhizha kushandiswa kwesimba kwemhepo kutonhodza kunogona kuderera.
Thermal inertia: ine hukama neiyo yapfuura. Iyo kiyi yekutarisa zvigadzirwa zvinogona kuve nemafuta anopisa. Izvi zvinhu zvinogona kuendesa simba zvirinani kushandisa shoma magetsi emagetsi.
Chinangwa chikuru chemabasa eimba yakasvibirira kudzora kabhoni tsoka uye nekuvandudza zviwanikwa zvakasarudzika zvakanyanya.
Nenzira yekupedzisa, zvinogona kunzi dzimba dzinoshanda kwazvo dzezvakatipoteredza ndidzo dzinovakwa nematanda. Neruzivo urwu unogona kuziva chimwe chinhu pamusoro pedzimba dzehunhu uye hunhu hwavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Hunhu uye nemhando dzedzimba dzimba
Victor R Castañeda R akadaro
Izvi zvinondikurudzira zvakanyanya kuti ndirambe ndichitsvaga dzimba dzegirinhi.Ndatenda, Mwari akuropafadzei.
Pindura Víctor R Castañeda R